सभामुख कृष्णबहादुर महरा माथि लगाइएको आरोप बारे थोरै नयाँ जानकारी - चारदिशा
October 1, 2019 चारदिशा देश
महरा र ति महिला बिच धेरै पहिलेदेखि सबै प्रकारको सम्बन्ध थियो । कस्तो सम्बन्ध र कति पहिलेदेखि थियो, प्रहरीले छानविन गरेर सार्बजनिक गर्नुपर्छ । मदिराको परिणामले मात्र यो घटना बाहिर आएको हो । ति महिला काठमाडौकै रैथाने हुन् । अर्थात यहिकी थर की हुन् । सधै राजीखुशीमा भइरहेको सम्बन्ध के कसरी किन बाहिर आएको हो, छिमेकीहरु पनि आश्चार्यमा परेका छन् । यो बिषय के कति सत्य हो, प्रहरीले छानविन गरेर सार्बजनिक गर्नुपर्छ । जागिरको बारेमा पनि बिबाद हुँदै आएको साँचो हो । तर, सहमतिमै हुँदै आएको सम्पर्कको हद वा बलत्कारको निकृष्टता के हो यो बिषयमा संसद सचिबालयले स्पष्ट पार्न कृष्णबहादुर महराले राजिनामा दिएर बाटो खुल्ला गर्नुपर्छ । उनले राजिनामा नदिएसम्म प्रहरी, संसद सचिबालय र अन्य न्यायीक निकायलाई छानविन गर्न सजिलो हुँदैन । सत्तारुढ नेकपाको आकस्मिक बैठक तुरुन्त बसेर सभामुखको बिषयलाई लिएर बिपक्षी दलहरुसंग आजै छलफल गर्नुपर्छ । किनकी कानुनी रुपमा कृष्ण बहादुर महरा नेकपाबाट राजीनामा दिएका भएपनि उनि पुर्ण रुपमा सत्तारुढ दलकै नेता हुन् । यसमा आफ्नो दलको नेता नभनी सत्तारुढ दलले छानविनमा सहयोग गर्न महरालाई तुरुन्त राजीनामा दिन लगाउनुपर्छ । यदि यो काम सत्तारुढ दलले गरेन भने हामी बुझ्नेछौं,
१, गृहमन्त्री राम बहादुर थापाले निर्मला पन्त बलत्कार हत्या हुँदा जनताले जवाफ मागेपछि थापाले भनेका थिए,‘यस्ता बलत्कारका घटना भइरहन्छन् । अनुशन्धान चलिरहन्छ ।’ यो नियत के श्रृंखलाबद्ध भइरहने हो त ? वा सत्तारुढ दलबाटै जनताले असुरक्षित महसुस गरिरहने त ?
२, सरकार भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको थियो । अब, हत्या, हिंसा र बलत्कार गरेर पनि नेपालको इतिहासमा नंवर वान सरकार यहि भयो भन्ने इतिहासमा लेखिनेछ ।
३, महरा माथिको आरोप आरोप मात्र पनि हुन सक्छ । तर, निष्पक्ष छानविनमा सहयोग गर्न सत्तारुढ दलकै मुख्य जिम्मेवार हो । यसमा बक्तब्यबाजी गरियो भने सरकारले नैतिकता गुमाउँदैछ ।
४, यो बिषय देशको प्रतिष्ठासंग जोडिएको कुरा हो । महरा र ति महिला बिचको हिमचिम कुन नैतिक धरातलमा हुन सक्छ, तुरुन्त संसद सचिबालयले बाहिर ल्याउनुपर्छ । नत्र भने हरेक महिला कर्मचारीले झनै असुरक्षित महसुस गर्नेछन् ।
५, माथि उल्लेखित बिषयमा सत्तारुढ दल र संसद सचिबालय गैरजिम्मेवार भयो भने महाअभियोगको प्रक्रियालाई बिपक्षी दलले तुरुन्त अघि बढाउनुपर्छ । महरा गलत नहुन पनि सक्छन् । तर उनि माथि थोरै भएपनि नैतिकताको प्रश्न उठिसक्यो । सम्मानित पदमा बसेको मानिस कसैबाट बिश्वासघातमा परेको वा कठपुतली षडयन्त्र भएको भनेर मात्र सुख हुने छैन । महरासंग जोडिएको यो घटनाको अन्तिम निर्णय गर्ने उपाय भनेकै महाभियोग नै हो । अब महराले महाअभियोगको सामना गर्नु अनिबार्य छ । महाअभियोगवाट हुने छिनोफानोले महराको भबिस्यको बाटो निर्धारण गर्नेछ ।
युवा वर्गमा बढदो भ्रष्ट मनोवृती ! कुन्दन कुमार झा